I-Semalt Expert ichaza indlela yokusebenzisa i-Web Scraping
Namhlanje abaphandi bewebhu bazama ukufumana iinkcukacha ezininzi kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ukugqiba iiprojekthi zabo kwaye kuza neziphumo ezinomdla ezingabancedisa ukuphucula amashishini abo. Ukuze benze njalo, basebenzisa i-web scrap . Inkqubo entsha kunye nenkulu, ebancedisa ukuqokelela ulwazi kumaphepha athile ewebhu ngokuzenzekelayo. Ngale ndlela, banokuqokelela iibhanki ezinkulu ezibalulekileyo ngaphandle kokuba benze yonke imisebenzi ngesandla. Oku kulandelayo kukho isikhokelo esikhulu sendlela yokusebenzisa i-web scraping.
Indlela yokucima amawebhusayithi
Ukuba ufuna ukukhangela iinkcukacha zoqhagamshelwano okanye amaxabiso emveliso okanye nayiphi na uluhlu, kufuneka basebenzise isiphequluli sewebhu. Ngokusebenzisa i-web scraping, umsebenzi uyenziwa ngokudala kuphela ikhowudi (eyaziwa nangokuthi 'i-scraper'). Lo mnxeba wenza wonke umsebenzi kubasebenzisi bewebhu. Umzekelo, uphando lonke ulwazi olufanelekileyo abasebenzisi bafuna ukufumana ngaphakathi kwamaxwebhu amaninzi kwaye baguqula kwiifom ezichaziweyo. Ezi nkcukacha zingaba ngemifanekiso yemifanekiso, izicatshulwa, izinto zeemveliso, ii-imeyile, iidilesi zeefowuni, amanani kunye nokunye. Izinto ezibalulekileyo zokwazi
Abantu abanqwenela ukuchonga iiwebhusayithi kufuneka bazi ukuba iphepha ngalinye lewebhu lihlukile kwaye linemigomo yalo nemeko. Ngokomzekelo, ezinye iiwebhsayithi zivame ukuguqula izixhobo zazo ngezikhathi ezithile. Ukugcina konke oku kuguquka kufuna umzamo omkhulu kunye neeyure ezininzi zomsebenzi. Abaphandi bewebhu nabo kufuneka baqaphele ukulandela imigaqo. Ngaphandle koko, banokuba neengxaki. Ukwenza njalo, banokukukopisha izinto ngaphakathi kwimizuzu ethile kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo kwi-Intanethi.
Fumana yonke i-Information Information
I-Web scraping inikezela ngamanye amathuluzi asebenzayo kumashishini nabantu ngabanye ukwenza uphando lweemarike. Ezi zixhobo ezizodwa zinokubanceda bafumane yonke idatha efunekayo yomsebenzi wabo, bahlalutye ngokugqibeleleyo baze bafumane iziphumo abazifunayo. Ngenxa yoko, banokukwazi ukunqoba abakhuphiswano babo banokunyusa ukuthengisa kwabo ngexesha. Ngokusebenzisa ithuluzi lokulahla kwewebhu, banako ukugcina uluhlu lweentlobo ezahlukeneyo zabakhiqizi okanye abaxhasi, kunye nemveliso kunye nokugcinwa ngaphezulu kwifayile.
Ngokusebenzisa ezi zixhobo ezisebenzayo , abaphandi bewebhu banokukhuphela iisombululo ezininzi zokufunda ngaphandle. Oku kungabanceda ixesha elide baze bafunde kwaye bahlalutye kwinduduzo yekhompyutha yabo ngokucinezela iqhosha elinye. Iyabasindisa iiyure zokuzama ukufumana zonke ezi nkcukacha ngesandla. Ngenxa yoko, abaxhomekeke kuncinci kwi-intanethi esebenzayo, njengoko banokufunda izibonelelo zabo kamva.
Fumana abasebenzi abanezakhono
Abaphathi abaninzi namhlanje bazama ukufumana abagqatswa beengcali ukuba bajoyine iqela labo okanye abafuna umsebenzi abazama ukufumana abantu ngesithuba esithile. Xa usebenzisa ezi zixhobo, banokufumana lula abantu abafuna.
Fumana ixabiso leMveliso yeMatriki ngokukhawuleza
Ukuba bajonge ukulandelela amaxabiso emveliso ethile, ngokusebenzisa i-web scraping bangazifumana ngokuzenzekelayo. I-Web scraping ingabancedisa ukulandelela onke amaxabiso ayifunayo kwiivenkile ezininzi ze-intanethi kunye neemarike Source .